Waa kuwee su'aalaha ku jiray feylka u tegey Wasiirka Yıldırım tareenka xawaaraha ku socda? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaSu'aalahee ayaa ku jiray faylka loogu talagalay tareenka xawaaraha sare?
Su'aalahee ayaa ku jiray faylka loogu talagalay tareenka xawaaraha sare?
18 / 12 / 2011 16 Bursa, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah
Wasiirka Cusub ee Tareenka Xawaaraha Sare
Su'aalahee ayaa ku jiray feylka soo socda?
Marka aad dhamaysid,
Waxaa iska cad in Bursa uu noqon doono mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee Bursa.
Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ah in hindisaha khadka xidhiidhka, oo ku xirnaan doona Bursa oo Bilecik ah isla markaana lagu darayo khadka ugu wayn, lama soo gabagabeyn karo, ayaa si tartiib tartiib ah ugu kordhaya Bursa.
Marka loo eego qorshaha;
Dhismaha xawaaraha sare ee tareenka, oo ka bilaabanaya Ankara oo gaari doona Istanbul, ayaa bilaabay 2003 waxaana loogu talagalay in lagu dhameeyo 2009.
Si kastaba ha ahaatee, xukuumaddu ma gaadhin hadafka.
Marka ay timaaddo 2009, oo kaliya oo ah xarun Ankara-Eskisehir ayaa lagu soo rogay.
Intaa waxaa dheer;
Kaliya 245 kilomitir xero cusub oo 197 ayaa ka kooban jidadka cusub, iyadoo tareenka xawaare sare leh ee ka soo baxaya Ankara laga yaabo inuu u wareego qadka cusub ka dib 40.
Inkasta oo aan wali la soo gabagabeyn xiritaanka Bursa-Yenişehir weli, ayaa MHP Bursa Ismet Macallinakataman ka codsaday Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Binali Yıldırım shalay khamiistii kharashkii kordhay.
Su'aashu waxay tahay mid aad u xiiso badan.
War saxaafadeed ay soo saartay TCDD 1. Inkasta oo qiimaha qandaraasku uu yahay € 18million, kororka kharashka ka yimid 459 ilaa 200 ayaa keenay qiimaha 250 Milyan euro si ay Buyukataman.
Wasiirka Yilidim, "Tani waxay kordhineysaa helitaanka line-ka Ankara-Eskisehir, waxaan la yaabanahay haddii qayb ka mid ah shaqada dib-u-cusboonaysiinta ay dhammaato," ayuu waydiiyay, yaa doonaya in uu barto cidda aqbashay kordhinta kharashka.
600 km ee tareenada xawaaraha sare ee adduunka oo dhan. Inkasta oo xawaaraha uu gaadhay xawaaraha qiimaha hindisada ayaa wali bixiya khidad aan weli ka badnaan xitaa 250'yi MHP'li oo waydiiyay sababta ay ugu qaalisan tahay Buyukataman, hadda sugaya sharaxaadda wasiirka Yiilis.
Su'aalahani waxay muujinayaan in Ugaas Cismaan uu leeyahay aqoon farsamo, sidaas awgeed jawaabta Wasaaradda waxay muhiim u tahay labada shacatmaan iyo Bursa.
Odayaasha Dhaqanka - Okan Tuna
Gaadiidkee ayaa ka gudbi doona buundada (Video)
Metrobus ayaa sidoo kale tareenka u raacay Bursa, ka dibna sababta
Wuxuu ka gudubtay mashiinka si loo dhiso tareenka xawaaraha sare
Taga tareenka xawaare sare ah ayaa tagi doona?
Ma tegi kartaa tareenka xawaaraha 1600 saacaddii
Bixinta naqshadeynta naqshadeynta iyo dhismaha ee udhaxeysa mashruuca gawaarida xawaaraha sare ee Istanbul-Ankara Geyve-Sapanca
In map 1941 ee tareennada Turkey Year